Eclipse IDE and its plug-ins [Programming]
Myanmar IT Resource Forum » PROGRAMMERS ZONE » » Java » Eclipse IDE and its plug-ins [Programming]
1 Eclipse IDE and its plug-ins [Programming] on 13th May 2010, 10:49 am
Java ကို သုံးပြီး အကြီးအကျယ် ရေးကြပြီဆိုရင်ဖြင့် professional IDE တခုခုကို သုံးရပါတော့မယ်။ အဲဒီအထဲမှာမှ Eclipse နဲ့ NetBean တို့ဟာ ထင်ရှားပါတယ်။
ဒီတော့ပစ်မှာ အီးကလစ်အကြောင်း ပြောကြပါမယ်။
2 Re: Eclipse IDE and its plug-ins [Programming] on 14th May 2010, 12:21 am
ဟိ။ Java ကို KMD (IDCS) မှာ Credit ရပြီးကတည်းက ၊ ကိုယ် မကြိုက်တာကို ဒီလောက်ထိ ရပြီးရင် တော်သင့်ပြီဆိုပြီး မလုပ်တော့တာ။ ခုထိလည်း မုန်းတုန်းဘဲ။
အဲတုန်းကလည်း သုံးတဲ့ IDE က JCreator ၊ သူတို့ပေးတာနဲ့ သုံးရတာ။ KMD တစ်ခုလုံးတော့ အဲဒါဘဲ သုံးကြတယ်။ NetBean ကို တွေ့လို့ ကောက် Run လိုက်တာ စက်ပါ Hung သွားတယ်။
အီကလစ်အကြောင်း အစ်ကိုနဲ့ အတူတူပြောနိုင်မယ့်သူ ရှာကြည့်ပေးမယ်နော်။
လောလောဆယ်တော့ အစ်ကို အရင်ပြောထားပေးဦး။
3 Re: Eclipse IDE and its plug-ins [Programming] on 18th May 2010, 3:51 pm
java နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အခြေခံလေးတွေ ပြောပေးကြဖို့
အက်ဒမင်တွေနဲ့ မော်ဒရိတ်တာကြီးတွေကို တောင်းဆိုပါတယ်ဗျာ
4 Re: Eclipse IDE and its plug-ins [Programming] on 1st August 2010, 5:58 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-04-30
5 Re: Eclipse IDE and its plug-ins [Programming] on 14th September 2010, 10:30 am
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-09-14
JAVA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့..အခြေခံကနေ..လေ့လာချင်လို့ပါ..ဆုက..U.C.S.Yကပါ..first yearပါ..
second year ရောက်ရင်တော့.သင်ရမှာပါ.ဒါပေမဲ့.ကြိုပြီးလေ့လာချင်လို့ပါ.. C++တော့..သင်ပြီးပါပြီ..
6 Re: Eclipse IDE and its plug-ins [Programming] on 14th September 2010, 6:59 pm
7 Re: Eclipse IDE and its plug-ins [Programming] on 14th September 2010, 8:37 pm
ကျွန်တော်လဲ လေ့လာချင်လို့ ပါ။
8 Re: Eclipse IDE and its plug-ins [Programming] on 20th November 2010, 12:16 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-05-23
java အခြေခံ က စပြီး လေ့ လာခြင်လို့ ကူညီကြ ပါ လားခင်ဗျာ
java ကို လေ့လာလို့ ရမည့် linkလေးများ ရှိရင် ဖော်ပြပေးပါလားဗျာ
ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိ ပါသည်
9 Re: Eclipse IDE and its plug-ins [Programming] on 23rd November 2010, 11:54 am
C0D3R wrote: ကိုလောရှည်ရေ ဆွေးနွေးမယ်လူတွေရောက်နေပြီ
My current focus is writing the "C++ Primer for anyone who has completed Middle School", although I'm currently coding in Java.
C++ is also used by Engineers. Many engineering students (Master level) are having trouble with C++ both in Yangon and Singapore. It is also true that howeverajava program is optimized, it can't beatawell-written C++ native code. With PLC and micro-controller (or embedded OS), C++ (or even C) isamust.
10 Re: Eclipse IDE and its plug-ins [Programming] on 23rd November 2010, 12:00 pm
Eclipse's philosophy and approach to IDE (Integrated Development Environment) is different to many commercial (and open-source) IDEs. It's approach is like an OS. The IDE hasakernel (unlike layered IDEs or an integrated IDE). Upon the kernel, you can fill the necessary plug-ins.
For example, if you wanna write C++ with Eclipse, you need CDT (C Development Toolkit). Eclipse is just an IDE, therefore you have to set its compiler. By differentiating IDE with compiler and plug-ins, it is good for beginners to understand the concepts of compiler and IDE.
For example, if you are going to writeaC++ program on Windows (or Linux). The compiler you use can be MinGW (or gcc). You can also use the compiler (free one) developed my Microsoft as VC++ Express and use it with Eclipse. Eclipse does not have its own C++ compiler.
However, Eclipse is an IDE. You can debug your code using its graphical interface. Another unique feature of Eclipse is that for each job (task), Eclipse hasadifferent view. Some people hate it but after some practice, you'd really love it. Believe me.
11 Re: Eclipse IDE and its plug-ins [Programming] on 24th November 2010, 7:04 pm
Eclipse တည်ဆောက်ထားပုံကို ကိုလောရှည် ပြောပြမှဘဲ သိတော့တယ်. ကျေးဇူးပါ...
လောလောဆယ် အကြိုက်တွေ့နေတာကတော့ Eclipse ကို အခြေခံပြီးတော့ Web Development အတွက် ပြန်ရေးထားတဲ့ [You must be registered and logged in to see this link.] ကို ကြိုက်နေတယ်။
version3အရောက်မှာ အတော်ကောင်းတဲ့ IDE ဖြစ်လာတယ်။ သူ့ Feature တွေထဲက အကြိုက်ဆုံးကတော့ Built-in Terminal ပါဝင်လာလို့ Git ကို IDE ထဲကနေဘဲ Access လုပ်ရင်းရေးလို့ရလာတာနဲ့ NetBeans တွေဘာတွေမှာပါတဲ့ Debugger တွေထက် ကောင်းတယ်ထင်ရတဲ့ Debugger လေးဘဲ..
anyway, Eclipse အလုပ်လုပ်ပုံ ပြောပြပေးလို့ ကျေးဇူး.
12 Re: Eclipse IDE and its plug-ins [Programming]